Dilaalkii dumarka maxamud xaashi Mr abdilahi yusuf ahmed . | Garadag News
Dilaalkii dumarka maxamud xaashi Mr abdilahi yusuf ahmed .
July 15, 2018 - Written by garadag garadag
Taarikhdii adkayd Ee musuq maasaq Ee maxamud hashi ayaa ka tegtay raad madow Isaga Oo baabiyey dhalinyaro badan una adegsan jirey siyabad Kala sidan , bulsho ahaan ku noqotay lafjab . Structure shaqo Ee wasiirku madaxtoyada ayaa u qaybsanayd qaybo badan , halkaas oo musuq masuqey qabo badan Sidaa xumbo weyne ,dhisanaayshii madaarada gobolada Iyo cadradaha.
Dhalinyarada lashaqayn jirtey wasiirka aya waxa ay hayeen masuliyado gaara . Abdilahi yuusuf Ahmed ayaa ahaa shaqsiga ugu aqoonta liitey dhalinyaradii la shaqyan jirtey wakhtigaa iguna faaidada badna Isaga Oo qabilsana arimaha qoyska Isaga Oo Shaqada Ka dhaxley inuu helo siro badan Oo ku saabsan ex wasiir maxamud xashi , Isaga Oo siraha Ka faaidaystey kana heley aduun badan .
Abdilahi yuusuf Ahmed, waligii ma gelin dugsi hoose Iyo mid sare toona & college mana qori karayo still phone numberkisa . Magalada burco soo galay 2005 , noloshisuna kasoo jeedo mii Hadana siraha uu maxamud hashi Ka hayey ayaa usamexdey in uu ucumaamado xilal waaweyn kana helo hanti badna sida guri ama gaadhi Iyo xadi lacagedba.
Ex wasiir maxamud hashi waxa uu isku dayey in uu horgeyo Ama ku khasbo beesha uu kasoo jeedo , 2016 dhamadkisa wakhtigaas oo beshasi ku shireysey degmada qoryaale Ee ka tirsan gobolka togdheer. Abdilahi yusuf in Uu noqdoo musharaxa goloha wakilada 2019 halkaas oo uu ku dhacay imtixankii aqooned Ee ay Ka qaadey beesha uu kasoo jeedo abdilahi yusuf . Waxa xusitan mudan in abdilahi yuusuf uu kuwayey jagadaa markii lugu yidhi (qor magacaga l) halkaas oo grn wayey sida uu u qormo qoraal ahaan magicisu .
Isla markana ay bashu goansatey ama xaqiiqsatey inaanu u qalmin xilkaas iyada Oo natiijada imtaxankas dhaxal siiyey inaanu Noqon Karin shaqsi mateli kara dastuur ahaana Noqon karayn qof geli karaya goloha sharci dejinta dalkan Somaliland.